FITATERAM-BAHOAKA AO AMIN’NY DISTRIKA MITSINJO : Misy fepetra horaisina koa amin’ny baka
Misy ny fepetra maromaro noraisina amin’ny fitateram-bahoaka ao amin’ny distrikan’i Mitsinjo sy Soalala iny. 12 septembre 2019
Hisy zandary hiahy manokana sy handamina amin’ny fiakarana sy fidirana amin’ny baka araka ny tapaka nandritry ny fivorian’ny OMC. Ankoatra ireo fepetra izay efa notaterina teto amin’ny pejin’ny Ino Vaovao Faritra. Izany dia hisorohana ny loza tsy hitranga. Tsiahivina moa fa ny distrikan’i Mitsinjo dia manomboka amin’ny tanànan’i Katsepy izany hoe miampita amin’ny baka dia tonga. Tsy lavitra an’i Mahajanga akory izy io, nefa dia zavatra hafa tanteraka no iainana any.
Lalan-tany no mampitohy ireo distrika roa ireo hatrany Maintirano. Fiara tsy mataho-dalana namboarina manokana sy nampiakarina no manao ny asa fitateram-bahoaka any. Mandritra ny maintany ihany izy ireo no afaka miasa fa rehefa asara dia trakitera sy unimog ary 6x6 no sisa afaka mandeha. Isan-taona dia tsy maintsy amboarina tanteraka ireo fiara ireo ka miala daholo ny vatany, averina amboarina ny jiro sy ny kojakoja rehetra. Raha mandalo fitsirihana teknika dia inoana fa vitsy amin’ireo fiara mpitatitra any no ho afaka. Tsy manaraka ny fepetra misy amin’ny fitaterana amin’ny tany sy ny fanjakana araka izany ireo fiara miasa any, tahaka ireo fiarabe navadika ho mpitatitra olona any amin’iny Faritra atsimo iny ihany. Raha 5 ka hatramin’ny 9 ny olona tokony hoentin’ny fiara tsy mataho-dalana amin’ny lalam-pirenena hafa dia tafakatra 16 no entin’ireo mpitatitra amin’iny lalana iny. Any ambony fitoeran’entana ny mpanampy ny mpamily ary misy roa ka hatramin’ny efatra izy ireo. Amin’ny maintany anefa rehefa voakiky ny lalana ka mahitsy dia tafakatra hatramin’ny 80km isan’ora ny hafainganam-pandehan’ireo fiara mpitatitra nefa ireo mpanampy ny mpamily ao ambony ao ihany.
Amin’ny asa ihany koa dia midoladola izay tsy izy ny fiara raha miditra anaty lavaka ary mirirana mihitsy nefa dia mbola ao ambony ao ihany ireo mpanampy mpamily. Hatreto anefa dia mbola vitsy dia vitsy ny loza miseho na dia mampatahotra ny tsy zatra tokoa aza ny mijery azy ireo. manomboka izao dia tsy azo atao intsony ny mipetraka any ambony fitoeran’entana sy ny ‘capot’ ary mikirazorazo amin’ny sisin’ny fiara. Izay tratra dia ampidirina ‘fourrière’ araka ny fanapahan-kevitry ny tompon’andraikitra.
Hofanina amin’ny fandriampahalemana
Hisy ny fanomezana fanofanana ho an’ny kartie mobila ho an’ireo fokontany rehetra ao Mitsinjo ka zandary tarihin’ny officier coordonateur de la gendarmerie amin’ny distrika Mitsinjo sy Soalala no hitarika. Hisy ihany koa fanofanana ny mpiray dina sy fandrindrana ny asan’izy ireo hifandray tanteraka amin’ny asan’ny mpitandro filaminana. Misarika ny ain’ny mpitatitra hanaraka ny lamina apetraka ny sefo ditrika satria ain’olona no tandremana, hoy hatrany izy. Manainga ireo kartie mobila rehetra ho avy hanaraka ny fanofanana ihany koa izy hanavahana ny vary sy tsiparifary ary hisy fizarana badge amin’ny kartie mobila rehetra aorian’ny fanofanana.